Gilgilasha adag oo laga muujinayo tillaabo uu ku ka cay taliyaha boliska qaranka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gilgilasha adag oo laga muujinayo tillaabo uu ku ka cay taliyaha boliska qaranka
"Arrin qatar badan"
La daabacay onsdag 6 september 2017 kl 11.59
Waxaa isa soo taraya gilgilashada laga muujinayo kashifaadda ay shalay wadojir u baahiyeen P4 Stockholm iyo Ekot oo ku saabsan tillaabada uu qaaday taliyaha boliska qaranka Dan Eliasson.
Idaacadahan ayaa kashifay in taliyaha boliska uu gaaray go’aan ku saabsan in shirkad gaar loo leeyahay loo suurtagaliya helitaanka macluumaad sir oo xasaasi ah oo ku jira nidaamka diwaan ee mushaaraadka ciidaanka boliska, taas oo jabinaysa qaraarka difaaca amaanka.
– Haday arrintaan jirto waa mid aad qatarteeda u leh. Maadaame arrinta ku saabsan tahay macluumaad xasaasi ah oo la xiriira ciidanka boliska iyo qoysaskooda. Waxa ay tusaale cad u tahay sida ay dowladda u maarayso macluumaadka xasaasiga ah, ayuu yeri Tomas Tobé oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka baarlamaanka ee cadaaladda ahna xubin sare oo ka tirsan xisbiga Moderaterna.
Hoggaamiyaha xisbiga Liberallerna asaga waxa uu kula taliyey talliyaha boliska qaranka in uu soo baxo oo sharaxaad ka baxiyo sida ay wax u dhaceen.
– Sharciga ma la jabin karo. Cidda haday tahay sharciga in ay raacdo waa madaxa boliska qaranka, ayuu yeri Jan Björklund hoggaamiyaha Liberallerna.
– Dan Eliasson horey waxa uu u qaaday tillbooyin uu dhaliil ku mutaystay middaana xaaladdiisa uga sii rayn mayso, ayey tiri Ebba Busch Thor oo iyaduna ah hoggaamiyaha xisbiga Kristdemokraterna.
– Warbaxintan haddii ay wax ka jiraan waa mid aad iyo aad u qatar badan. Ma ahan in aan haysano madax jabineysa sharicga iyo xeerarka. Waana in aan difaacno ciidamadeena boliska, ayuu asna yeri Hoggaamiyaha xisbiga Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt.
Möte i Rosenbad om polisens personalsystem